Video Splicer: Si fudud Abuur Movie a joogta ah la yeeshaan Clips Your Small
> Resource > Video > Sida loo Splice Videos wadajir ah
Raadinta barnaamij lagu splice aad darbo yar digital camera, ama cajalado VHS qabtay iyo videos qoyska? Tan iyo markii badan oo inaga mid ka faa'ideysato jeebka kamaradaha digital, telefoonada gacanta, iyo wareegtay video in ay qaataan videos meel kasta oo suurtagal ah, in aad u badan tahay Gabagabeyn Doonaa la farabadan of video clips ku kaydsan on your computer. Waxaa kale oo fikrad fiican si ay u wada splice si ay u abuuraan filim cusub.
Laakiin sidee? Sababta sababta aad halkan u joognaa. Ha ka walwalin. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ), sida barnaamijka ugu fudud in la abuuro filimada guriga, baahidaada u qalma. Sidaa daraadeed, waxaad tahay inay awoodaan inay wada splice qaab video, si aadan dhibaato in wax soo saarka aad camera waa qaab la mid ah ama aan. Si fudud u dajiyaan clips aad rabto in aad splice iyo abaabulo si ciyaareed ku Timeline ah, markaas barnaamijka abuuri doonaa hal video aan xuduud lahayn qaab aad u jeclaystay. Fiiri sida ay u fududahay hoos ku qoran waa.
Download iyo rakibi this splicing software video on your computer. Hagaha hoos ku qoran waxay ku salaysan tahay Windows, laakiin version Mac dhow ka shaqeeya isku mid.
Iska bilaabay in ay wada splice filimada aad adigoo gujinaya "Import" in ay ku shuban aad isha files barnaamijkan. Tan iyo markii ay taageerto dhowaad dhammaan qaabab loo jecel yahay halkaas, aad dhibin doonaa arrinta incompatibility ah.
Talooyin: Haddii aad rabto in aad ku darto files si toos ah uga camera digital, kuu gudbin karaan talooyin dheeraad ah halkan: sida loo wareejiyo fiidiyo video in computer .
2 Splice video by jiitaa-n-dhibic
Haddaba waad arki doontaa dhammaan faylasha muujinaya in thumbnails in ay leeg- bidix. Si ay iyaga ugu wada splice, aad tahay kaliya hal talaabo iska. Si fudud u jiidi oo hoos u dhammaan faylasha aad doonaysid in aad isku biiraan si ay Timeline Video ah. Markaas riix icon play kor ku xusan Jadwalka ah. Haa, ay horey u soo wada muuqan spliced.
3 Edit iyo kor video (optional)
Ka dib markii ay wada filimada splicing, waxaad ka hor tegi karin inuu siiyo movie oo dhan eegno cusub. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxay bixisaa oo dhan aasaasiga ah video & itusi audio waxaad u baahan tahay, oo ay ku jiraan warejin, Nuurkii / barbardhigo / qabsiga daran ah, cod beddelo, ciyaaro xawaaraha meel, iyo in ka badan. Tani weheliso 300+ cajiib kala guurka, horyaal, Intro / credits, Liiska Forbes ka dhigi doonaa shuqulkiisa oo dhan ugu soo jiidasho badan oo u gaar ah.
Marka aad ku qanacsanayn natiijada, guji "Abuur" inay u dhoofiyaan abuurkiinna. Offline ama online, waxaad had iyo jeer ka heli doontaa hab si uu u badbaadiyo video leh tayo sare leh. Splicer video ayaa xitaa awood u aad u gubi DVD si toos ah si aad u daawato TV-ga.
Download Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) tijaabo oo lacag la'aan ah hadda:
Top 10 Tools in ay dar Music Videos in Online